सुन्दर अनुहार होस् भन्ने चाहाना सबै महिलाको हुन्छ । तर, चाहाना भएर मात्रै कहाँ हुन्छ र ? त्यसका लागि त उपायको खोजी गरी नियमित रूपमा त्यसलाई पछ्याउनु पनि पर्‍यो नि । हरेक महिलाको चाहना सुन्दर देखिने भए पनि उनीहरूले केही त्यस्ता हेलचेक्र्याइँ गर्छन्, जसले उनीहरूको सुन्दरतामा असर गरिरहेको हुन्छ । सुन्दर बन्न के गर्ने त ? यी कुराको ख्याल गर्नुहोस् ।
हरेक महिला आकर्षक देखिन जस्तोसुकै पनि उपाय अपनाउन खोज्छन् । तर, नियमित व्यायाम जान खोज्दैनन् । सुन्दरतासँगै स्वस्थ शरीरका लागि पनि नियमित व्यायाम जानुपर्छ । स्लिम वन्न कडा भन्दा कडा व्यायाम गर्नेहरू पनि छन् । तर, त्यस्ता युवतीहरू एकदमै कम मात्रामा देखिएका छन् । कडा व्यायाम भन्दा पनि नियमित रूपमा व्यायाम गर्ने युवतीहरू चाँडै सुन्दर बन्न सक्छन् ।
स्लिम बन्नका लागि सकेसम्म कम खानेहरू पनि धेरै देखिएको छ । यसप्रकारको कार्य पनि ठीक होइन । खानपानमा कटौती गर्ने तथा खाँदै–नखाने प्रवृत्तिले शरीरलाई असामान्य बनाउने मात्र नभईकन ग्यांस्ट्रिकको रोगी पनि बनाउन सक्छ । त्यसकारण, स्लिम हुने हो भने एकैपटक धेरै खाना नखाने, तर पटक–पटक गरेर खाने गर्नुपर्छ । पेट भोको राखेको राम्रो हुँदैन ।
साँच्चै सुन्दर र स्लिम बन्न खोज्नुभएको छ भने पर्याप्त मात्रामा पानी चाहिन्छ । धेरै पिसाब लाग्ने डरले कतिपयले पानी कम खाने गरेको पाइन्छ । त्यसो गर्नु अवश्य राम्रो होइन । कम्तीमा दैनिक आठ ग्लास पानी खानु अत्यन्त आवश्यक छ ।
कडा परिश्रमभन्दा पनि चिल्लोविहीन खाना खाने बानी बसाल्नुपर्छ । त्यसमाथि, दैनिक एक घन्टा पैदल हिँड्ने बानी गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा पनि तपार्इंमा निहित मोटोपनालाई घटाउने गर्दछ ।
नियमित रूपमा खानपान र आवश्यक पौष्टिक तत्वको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । फलफूल प्रशस्त मात्रामा खाने हो भने मानिसको छालालाई चमकता प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।